Guqula umgangatho wethu wokucoca ulunge kumgangatho wamanzi akho
Ukusukela ukuGqwesa kuMgangatho
Umgangatho ophezulu uvela kubuchwephesha obuchanekileyo, inkqubo yolawulo egqibeleleyo kunye nolawulo olungqongqo. Siyaqhubeka nokulandela umgangatho kuyo yonke inkqubo yazo zombini izinto ezingenayo eziluhlaza kunye nezinto ezenziweyo kwimveliso okanye imveliso egqityiweyo. Iimveliso zethu zinikwe ezi ziqinisekiso zilandelayo: NSF, WQA, IAPMO, WRAS, ACS, MOH, CCC, CQC, CE, EMC, ROHS, GS, PCT, IMQ, UL, FCC, CB, NOM, SIRIM. JBE (ST), TISI, Ukhuseleko, njl.
Inkqubo ye- I-R & D yeTekhnoloji yokuCoca ilandela ngokungqongqo umgangatho kunye nommiselo kwishishini lonyango lwamanzi. Sithatha ulawulo lweprojekthi njenge-axis ephambili, kwaye sisebenzisa izixhobo ezintlanu kunye neengcinga zobunjineli ze-APQP, i-FEMA, i-MSA, i-PPAP kunye ne-SPC ukuphumeza inkqubo yenkqubo ejolise kubathengi ukuze iimveliso zikwazi ukuhlangabezana neemfuno zentengiso ngokukhawuleza nangokuchanekileyo ngakumbi ukuqinisekisa umgangatho.
ILebhu yoVavanyo yoKwakha ukuphucula uMgangatho woKhathalelo
Iziko lethu lokuvavanywa kokuhluza amanzi ngaphakathi lasekwa ngokwe-NSF, WQA kunye neminye imigangatho egunyazisiweyo yokuqinisekiswa. Amandla ethu okulawula nokuvavanya ahambelana nemigangatho eyamkelweyo kwilizwe liphela eyilelwe iimveliso ezinxulumene namanzi. Ilabhoratri inezixhobo ezisibhozo zovavanyo lwe-NSF, ezinokuthi zenze uluhlu olupheleleyo lovavanyo kukhuseleko lwezixhobo, ukhuseleko lolwakhiwo, ukhuseleko olusebenzayo, ukhuseleko lombane, ukhuseleko lwezothutho kunye nokusebenza kokucoca, kubandakanya ngaphezulu kwekhulu leemvavanyo, umzekelo, amandla olwakhiwo , ukuguga, i-acoustic, i-microbiology, ukuhambelana kombane, njl.
Ngo-Septemba ka-2018, ilebhu yethu yokuvavanywa ngaphakathi eqinisekisiwe yiNkonzo yokuQinisekiswa kweSizwe yase China yoVavanyo loVumano (CNAS)
Izibonelelo kubathengi zenza le migudu ilunge. Inciphisa umngcipheko ngokusivumela ukuba sijongane nemicimbi enokubakho kwangaphambili, ke, ngokubonelela ngesiqinisekiso esinokuthenjwa somgangatho, kuyanceda ukunciphisa izikhalazo zemveliso kunye nokugcina inkcitho emva kwentengiso.
Iiprojekthi ezifuna isatifikethi nazo zinokuxhamla kwilabhoratri yethu, njengoko sinakho ukuqhuba iimvavanyo zangaphakathi endlwini phambi kovavanyo ngamaqumrhu eziqinisekiso anegunya. Oku kuthetha lukhulu kuwe ngokuphepha ukuhambisa kwakhona ukusilela kovavanyo kangangoko kunokwenzeka ukukhawulezisa inkqubo yesiqinisekiso.
Uluhlu lweemveliso kunye nokuqinisekiswa kuthetha lukhulu kwisihluzo samanzi. Iifilitha ezihlangabezana nomgangatho ziyakwazi ukunciphisa ukubekeka kwizingcolisi ezinxulumene nempilo. Sikulungele kwaye sihlala sikulungele ukukunceda ukuba ungenise iimveliso kuvavanyo lomntu wesithathu xa ufuna njalo.
Ukuthatha inxaxheba kwiNkqubo yokumisela iMigangatho
Ukuthatha inxaxheba ekusekweni kwemimiselo kazwelonke kumgangatho wamanzi, sibeka imigangatho yangaphakathi edlula ngaphaya kwemigaqo yesizwe. Kuwo onke amabakala ophuhliso ngaphambi kokumiliselwa kwemveliso, sinika ingqalelo ephezulu kuvavanyo kumgangatho nokhuseleko. Siza kuqhubeka nokugcina umgangatho weemveliso uhambelana, uthembekile kwaye ukhuselekile kubathengi.
Umcoci wamanzi waManzi aKhuni, Cofa inkqubo yokuCoca amanzi, Eyona Ndlela yokuBuyisa iOsmosis, Hluza iCartridge, Ukutshintshwa kweFilitha yeCartridge yaManzi, Indlu yonke yokuCoca uManzi,